WhatsSAp | को साथ अधिसूचनाहरूबाट श्रव्य सुन्नुहोस् आईफोन समाचार
व्हाट्सएपको साथ तपाईं अधिसूचनाहरूबाट अडियोहरू सुन्न सक्नुहुन्छ चाँडै यस अनुप्रयोगमा एक धेरै महत्वपूर्ण पुनर्संरचना हुन गइरहेको छ, र आज हामीले यो नयाँ सुधारको बारेमा पनि सिक्यौं जुन पनि लागू हुनेछ।केही दिन अघि हामीले रिपोर्ट गरिसकेका छौं समाचार त्यो फेसबुक हामीलाई WhatssAp को साथ प्रदान गर्न गइरहेको छ र अब हामी सूची मा थप्न को लागी अर्को फेला पार्न।
मार्क जुकरबर्गले व्हाट्सएप खरिद गरेदेखि यस अनुप्रयोगको एकीकरणको बारेमा फेसबुकमा यसको मेसेन्जर बढाउन धेरै कुरा भनिएको छ। केहि यथार्थबाट अर्को छैन। प्रत्येक दिन यसको स्वतन्त्र फेसबुक अनुप्रयोगको रूपमा सशक्तिकरणले अधिक सामर्थ्य लिन्छ, र यसको प्रमाण गहिरा आन्तरिक रूपान्तरण हो जुन एप्लिकेसनबाट हुनेछ, यसको सर्भरहरूमा कुराकानी बचत गर्दै, तिनीहरूलाई विभिन्न उपकरणहरूबाट पहुँच गर्न सक्षम हुनको लागि, छवि र समानतामा। यसको प्रतिस्पर्धी टेलिग्राम।
WABetaInfo तपाईंले भर्खरको बेटामा यो नयाँ फिचर लागू गर्नुभयो जुन वाट्सएपबाट रिलीज भएको छ, र उनीहरूले यसलाई पहिले नै छनौट तरिकामा परीक्षण गरिरहेका छन्।
तपाईं सूचनाबाट अडियो सन्देशहरूको जवाफ दिन सक्षम हुनुहुनेछ, अनुप्रयोग प्रविष्ट नगरी नै। व्यावहारिक हुनुको अलावा हामी आफैलाई आनन्दित "अनलाइन" बचत गर्नेछौं किनकि हामी WhatsSAp मा प्रवेश गर्न पाउनेछैनौं, "इन्कग्निटो" जवाफ दिन सक्षम हुँदै।
भ्वाइस सन्देशहरूको प्लेब्याक सक्रिय गरिएको छ (हामी सँधै पछिल्ला बिटा संस्करणको बारेमा कुरा गर्छौं) यदि तपाईंको फोनको अन्तिम अंक बेजोड छ भने। अर्कोतर्फ, यदि यो छ भने, अडियो फाइलहरूको प्लेब्याक सक्रिय गरिएको छ।
यो आंशिक कार्यान्वयन एक परीक्षण हो, र भविष्य बिटामा सबै बीटा परीक्षकहरूको लागि पूर्ण हुनेछ। यस समयमा यी अडियोहरूलाई अर्को भ्वाईस मेमोको साथ जवाफ दिन सकिदैन।
यो सुधार समाचारको सूचीमा थपिएको छ जुन हामी चाँडै नै देख्नेछौं, सँगै सर्भरको नयाँ प्रयोगको साथ, मल्टिप्लेप्लेटमा व्हाट्सएप, डार्क मोड, इत्यादि।
के तपाईं सेप्टेम्बर १० मा आधिकारिक अपडेट जारी गर्नुहुनेछ? केहि धेरै रमाईलो दिनहरू हाम्रो पर्खाइमा छन्…।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » व्हाट्सएपको साथ तपाईं अधिसूचनाहरूबाट अडियोहरू सुन्न सक्नुहुनेछ चाँडै
र एप्पल वाच को लागी?
रोलर कोस्टरको बीचमा उडानमा आईफोन एक्सको खोजी गर्नुहोस्